Waa maxay AirPort maxaase loogu talagalay | Applelised | Waxaan ka socdaa mac
Waa maxay AirPort maxaase loogu talagalay
Marar badan waxaan helnaa alaab Apple in aan si fiican loo aqoon oo ay shaqadoodu naga dhigayso mid xiiso leh. Maanta waxaan idiin soo gudbinayaa sharaxaad kooban oo ku saabsan AirPort, haddii ay shaqeyneyso iyo haddii ay mudan tahay in la iibsado.
1 AirPort shirkadda Apple
1.1 Dejinta AirPort
AirPort shirkadda Apple
Marka hore waa inaan ogaanno taas Apple waxa aad raadineyso waa in aaladahaaga oo dhami isku xirmaan iyagoon wax dhibaato ah qabin sidaan horeyba ugu aragnay AppleTV iyo qalab aad muhiim u ah oo aan ku isticmaalno aaladahayaga oo dhan, iCloud. Taas awgeed Apple Waxay sidoo kale ka walwalsan tahay sidaa darteed guryaheena iyo xafiisyadeena waxaan fursad u lahaan karnaa inaan kula falgalno aaladaha dibada.
Sida aan ku aragno sawirka, AirPort Waxay ka kooban tahay 5 gasho iyo badhan yar. Dekedda koowaad, oo ku taal bidixda sawirka, ayaa loogu talagalay ku xir xarig koronto hadda, waxaa ku xiga a isku xirka ethernet taas oo aan ku xireyno fiilada ka soo socota modemkeena caadiga ah AirPort oo sidaas ayaan ku bixi doonnaa AirPort maaraynta shabakadeena internetka.
Dekedda Ethernet ee soo socota waxay noqon doontaa bilaash inay kumbiyuutar ku xirmaan xarig. Hoos waxaan ka heli a Dekedda USB taas ayaa noo oggolaan doonta inaan u beddelno daabacad caadi ah a AirPrint taasi waa, haddii daabacahaaga uu ku xiran yahay kaliya fiilada USB, waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad ku xirto AirPort, ka habayn ka Mac iyo voila, hadda waxaad siligga ka daabacan kartaa mid kasta iDevice.
Mid ka mid ah shaqooyinka aan aadka u jecelahay ayaa ah iyadoo la adeegsanayo fiilo maqal ah ama wax soo saar kaabayaal ah oo ku xiran cod baahiye ama qalab cod waxaan ku soo saari karnaa codka aaladahayaga.cufan silig la'aan meel kasta oo ka mid ah gurigeenna ama meesha aan ku xirno AirPort, sida aan ugu xirno Apple TV, waxaan kaliya xulanaa AirPort oo diyaar!
Ugu dambeyntii, badhanka yar ee aan ka helno midigta guud ahaan waa in dib loo bilaabo Adhoofin haddii aan dhibaatooyin la kulanno oo aan dooneyno inaan ka soo jaangooyo meesha laga soo bilaabay.
Qaab dhismeedkeedu wuu ka fudud yahay sidaad moodeyso At Mac kaliya waa inaad raadisaa Adeegga AirPort isla markiiba way kuu muuqan doontaa adiga oo qalabka ku jira macruufka waa inaad soo degsataa barnaamijka bilaashka ah Adhoofin oo ka mid ah app Store waxaadna ku heli doontaa wax walba oo ka mid ah arjiga si aad u qaabeyso.
Sida aan ku aragno sawirka AirPort Express Waxay noo oggolaan doontaa inaanu qaabeyno shabakad Wi-Fi gaar loo leeyahay, qarsoon ama marti ah si aan si wanaagsan ugu abaabulno aaladaha ku xiraya shabakadeena, marka lagu daro inaan awoodno inaan qaabeyno laba nooc oo shabakad isku xiran ah 2,4 Ghz qalabka ka hor iPhone 4s iyo koox ka mid ah 5 Ghz qalabka dambe.
Intaas waxaa sii dheer, mid ka mid ah shaqooyinka ugu waaweyn waa taas ballaadhi wifi wifi waxaadna ka heli doontaa soo dhaweyn dheeraad ah meel kasta oo aad ku sugan tahay qalabkaaga ku xiran.
Waxa intaa u dheer AirPort Express waxaan leenahay isaga Kaabsolka Waqtiga Aad u Wanaagsan ee Madaarka in wada jir ah oo leh isla shaqooyinkii horeba loo arkay, waxay ku darsanaysaa saddex cusub oo aad u xiiso badan. Midda hore waxay tahay inay kujirto wadis adag oo ka timaadda 1 TB illaa 3 TB oo si joogto ah u keydin doona dhammaanteen Mac.
Marka labaad, haddii aan ku xirno AirPort xad dhaaf ah dirawal adag oo USB ah waxaan kula wadaagi karnaa macluumaadkaaga silig la'aan dhammaan qalabkeena ku xiran shabakadda
Ugu dambeyntiina, waxaan heli doonnaa dekedo badan oo ethernet ah iyo ballaadhin ballaaran oo ku saabsan shabakadeena Wi-Fi maxaa yeelay waxaan gelin karnaa mid qolka fadhiga iyo mid qolkeenna iyo kan garoonka diyaaradaha ayaa ku celin doona isla markaana kordhin doona calaamadaha shabakadeena Wi-Fi garoonka diyaaradaha.
Wixii horeyba loo yiri, aniga shaqsiyan iibsashadaadu waa ikhtiyaar wanaagsan haddii gurigaaga ama goobtaada shaqada ay ballaaran tahay oo internetkaagu uusan laheyn calaamadda Wi-Fi ee wanaagsan, sidoo kale haddii aad ka mid tahay kuwa aan jeclayn fiilooyinka aad u badan waa ikhtiyaar wanaagsan in muusikadaada, daabacahaaga iyo feylashaada si joogto ah loo wadaago iyadoon laga walwalin isku xirnaanta iwm Apple markasta wuxuu rabaa inuu nasiyo raaxo iyo in kabadan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » Gargaarka » Waa maxay AirPort maxaase loogu talagalay
jose luis rojas sanduuq dijo
Waad salaaman tahay maqaal wanaagsan, laakiin sidoo kale waxaan rabaa inaan ogaado haddii had iyo jeer ay tahay in lagu dhejiyo routerka iyo in kale. Iyo haddii aan sidoo kale abuuri karo daruur ka baxsan dibedda
Ku jawaab jose luis rojas box
Airpot Expres waa inuu ku xirnaadaa router-ka, iyadoo la adeegsanayo wifi, ama waa inuu si toos ah u beddelaa routerka ay shirkaddu bixiso.
Jawaab David Marsinyach
Ku jawaab luis muñoz
Waxaan rabaa inaan u isticmaalo inaan ku sii dheereeyo caymiska wi-fi guriga. Miyay tahay in reuter-ka ugu weyni uu noqdo tufaax sidoo kale?
Barnaamijyada ugu fiican sawirada qosolka leh ee iPhone ama iPad
Blue Planet, ku dar sawirada dayax gacmeedka Dunida sida asalka desktop